China Industrial Collagen ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
I-collagen yethu yezimboni equkethe i-18kinds yama-amino acid, inani eliphakeme lokudla okunempilo, ukusebenza okuqinile, i-collagen yinto enhle yemvelo yomsebenzi womzimba. I-hydroxyproline ne-hydroxylysine ihlukile kuma-collagen amino acid.
IGelken Gelatin wukudla okumsulwa, okusezingeni eliphakeme kwamaprotheni okukhiqizwa ngezinto zokusetshenziswa ezisezingeni eliphakeme zezilwane kanye nezinsizakusebenza eziphambili kakhulu zezimboni. IGelatin ivela ezingulubeni, enkomeni noma enhlanzini. Ukukhethwa ngokucophelela kwezinto zokusetshenziswa kuyisisekelo sokukhiqizwa kwe-gelatin ukuqinisekisa ukuphepha komkhiqizo nekhwalithi.
Abenzi beGelatin basebenzisa izingulube ezinempilo, izinkomo nezinhlanzi kuphela njengezithako.
Ngaphezu komswakama nomlotha, okuqukethwe kwamaprotheni kweGelatin kungaphezu kwama-85% .Kulungele ikakhulukazi eminye imikhiqizo enosawoti ophansi, ushukela ophansi nokuma kwamaprotheni aphezulu. Ngaphandle kokunikeza amaprotheni womkhiqizo, futhi ingahlinzeka ngesakhiwo esikhethekile somkhiqizo.
I-collagen yezimboni ama-polypeptides, ama-dipeptides nama-amino acid ayinkimbinkimbi akhiqizwa yi-hydrolysis nokonakala kwe-collagen.
Amaprotheni ethu ezimboni ngu okuphakelayo grade collagen, futhi isilwane collagen, esetshenziswa kakhulu ekuphakeleni kwezilwane okuhlukahlukene ukwenza ngcono okuqukethwe kwamaprotheni nokwandisa ukondleka.Ingasetshenziselwa ne-electroplating, engeza izinto zokulwa nomlilo, njll.
Umumo womkhiqizo: i-powder emhlophe noma i-powder ephuzi elula, kulula ukuncibilika emanzini, kulula ukuncela umswakama, ngemuva kokumunca umswakama ukubopha okuqinile.
Izakhiwo zamakhemikhali: Ama-polypeptides, ama-dipeptides nama-amino acid ayinkimbinkimbi akhiqizwa yi-hydrolysis nokonakala kwe-collagen. Inokujwayelekile kwamaprotheni.
Inani le-nitrogen: ngenhla kwe-10.5%, umswakama ≤5%, umlotha ≤5%, inani le-phosphorus ≤0.2%, i-chloride ≤3%, okuqukethwe kwamaprotheni ngaphezu kwe-80% .PH: 5-7.
Izinga Lokuhlola: GB 5009.5-2016
Izinto Ukucaciswa Umphumela Wokuhlola
Amaprotheni （%, ukuguqulwa kwesilinganiso 6.25） ≥95% 96.3%
Umswakama (%) ≤5% 3.78%
Umlotha (%) ≤10% 6.70%
Izinhlayiya ezingaxazululeki ≤1 0.6
Insimbi Enamandla 100ppm <100ppm
Isitoreji: Gcina endaweni epholile futhi eyomile, ezingeni lokushisa kusuka ku-5ºC kuye ku-35ºC.
Langaphambilini I-Capsule Engenalutho Elukhuni
Olandelayo: Isilwane sasekhaya uCollagen